Edhisheni nhau sechipo mazano | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku matsva sezvipo zvechipo
Ndinofanira kutaura, uye kundiruramisa kana ndakanganisa, kuti vanhu vakaita sesu, vanoda mabhuku, vanoita kuti zvive nyore kwazvo Santa Claus kana kuti varume vakachenjera. Zviri nyore sekuziva zvishoma (chii zvishoma, handiti?) Zvinyorwa zvedu zvekuverenga kuti tikwanise kuwana chipo chaicho ... Usandipe bhuku raBelén Esteban, zvakanaka? Ndatenda!
Ichi chikonzero ndechekuti ndinokuunzira mamwe nhau dzekunyora izvo zvichangobva kusiya kana kuti zvave kuda kusiya mwedzi uno, inogona kunge iri yakanaka chipo zano kune izvi Navidad izvo zvatave nazvo pamusoro.
1 "Labyrinth yemweya", naCarlos Ruiz Zafón
2 «Iyo Olympus yeVakatambudzika» naJasmina Khadra
3 Landon. Iye zvino uye Nokusingaperi »naAnna Todd
4 "Mwanasikana weCayetana" naCarmen Posadas
5 «Zvemaziso ako chete» naJJ Benítez
"Labyrinth yemweya", naCarlos Ruiz Zafón
Nebhuku rino tinosvika kumagumo kwesaga re "Mumvuri wemhepo". Kune avo vanhu vakaverenga mabhuku matatu akaburitswa parizvino nemunyori wechiCatalan, ichi chinyorwa chinyorwa chingave chiri chakakwana chipo. Heino chirevo chayo:
MuBarcelona pakupera kwema50, Daniel Sempere haasisiri mukomana uya akawana bhuku raizochinja hupenyu hwake munzira dzeMakuva eMabhuku Akakanganwika. Chakavanzika cherufu rwaamai vake Isabella chakavhura gomba mumoyo make umo mukadzi wake Bea uye shamwari yake yakatendeka Fermín vanoedza kumuponesa.
Panguva chaiyo apo Danieri anotenda kuti iye nhanho imwe kubva mukugadzirisa iyo enigma, rangano rakadzika kwazvo uye rakasviba kupfuura iye zvaaigona kumbofungidzira kufukura dandemutande raro kubva mudumbu reRegime. Ndipo ipapo Alicia Gris, mweya wakazvarwa kubva mumimvuri yehondo, unoita seinovatungamira kumoyo werima nekuburitsa nhoroondo yakavanzika yemhuri ... kunyangwe pamutengo unotyisa.
«Iyo Olympus yeVakatambudzika» naJasmina Khadra
Kune vanhu vari kutsvaga mubhuku re inonakidza nyaya uye zvakasiyana nevamwe.
Ngano inoparadza izere nehunyoro iyo inotinyudza mune zvakasikwa zvevatambi vasina zvakapfuura kana zvazvino. Iri pakati penzvimbo yakaparadzwa negungwa, kunze kwenguva nenzvimbo, iri basa rerunako rusingayerike inzvimbo inopararira inogarwa nevanhu kumucheto vakasarudza kufuratira nyika.
Ach, Junior, Pacha uye vamwe vatema nerima uye vanonakidza vanogara ipapo. Nzvimbo yemasirage, yekusurukirwa kukuru, yenyadzi uye zvakavanzika zvisingataurike. Asi munzvimbo iyoyo mweya wekubatana unozvarwa, pfungwa yehukama inopesana neyakaenzana yenzanga yazvino.
Landon. Iye zvino uye Nokusingaperi »naAnna Todd
Kana iwe uchida kupa mabhuku kune mumwe munhu YoungPamwe bhuku iri naAna Todd ungangoda. Mhedzisiro yesaga iyi nyowani sekunakidza kwayo.
Hupenyu hwaLandon kuNew York hausi kuzochinja nenzira yaanga achifungidzira. Tessa achiri akasuwa uye akazvivharira mukati nekuda kwaHardin, iro basa raanaro harinakidze uye, pamusoro pazvo, Dakota akaonekazve muhupenyu hwake apo paanotanga kunzwa chimwe chinhu kuna Nora akanaka uye anoshamisa. Asi Landon anoda kukunda zvipingamupinyi zvese kuti awane nzira yake uye pakupedzisira awane rudo rwake rwechokwadi. Ndiani achabata moyo wako?
"Mwanasikana weCayetana" naCarmen Posadas
Kune avo vanhu vanofarira zvese nyika ye "moyo" uye iyo nhau.
Chiitiko chinoshamisa uye chakakanganikwa chinotarisa mumwe wevakadzi vane mukurumbira munhoroondo yedu: Cayetana de Alba, muse museji usingakanganwike waGoya. Eccentric, capricious uye yemahara, kweanopfuura makore mazana maviri simba rayo rekukwezva rakaramba risina kuchinja. Nekudaro, vashoma vanoziva kuti maDuchess akagamuchira musikana mutema, María Luz, waaida nekurera semwanasikana uye kwaari waakasiya chikamu chemari yake. Carmen Posadas ane hunyanzvi ruoko rwekuuya kwevanaamai vaviri: uyo wekurera, aine rudo rwake nemadhirama kudare raCarlos IV, dendere rechokwadi rezvinyengeri, uye nerezvakaberekwa, Trinidad uyo, muranda kuSpain, anotambura kutsvaga mwana waakatorwa kubva pakuzvarwa.
«Zvemaziso ako chete» naJJ Benítez
Kune avo vanofarira paranormal uye pamwe nekugona kuti kune hupenyu hwepanyika.
MunaGunyana 2016, JJ Benítez anotendeuka makumi manomwe neshanu nemakumi mashanu nemashanu ekutsvaga kweUFO. Parizvino ndiye mumwe wevaongorori vane ruzivo. Kuenderana nemhemberero mbiri idzi, munyori anonyora
ZveMaziso ako Chete sebasa rekurangarira, mushure memabhuku makumi maviri nemaviri pamusoro penyaya iyi. Inosanganisira mazana matatu asina kunyorwa eUFO makesi, akanyoreswa kutenderera pasirese, ayo nechimwe chikonzero kana chimwe chakakanganisa muongorori.
Iri bhuku, rizere nekufarira uye kuda kuziva, rinopedziswa nemifananidzo inopfuura mazana matatu, yakatorwa mumabhuku emunyori emunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku matsva sezvipo zvechipo
Decalogue yemunyori akanaka